Dabaqa Laminate Jumlada ee Jumlada iyo taxanaha caadiga ah Soo -saaraha iyo Bixiyaha | Moyo
Cabbirka: 1218x240mm, 1218x198mm
Dhumucdiis: 7mm 8mm 10mm 10.5mm 12mm
Dusha Qoryaha-hadhuudhka lagu xardhay
Fasalka Abrasion ： ac1/ac2/ac3/ac4
Nooca Muhiimka ah Hdf
Tilmaamaha Alaabta: Looxa Balaadhan
Rakibaadda: Guji Wadajir - Hoos ku lifaaqan
Dammaanadda Ganacsiga: Iftiinka Sannadka 3
Dammaanadda Degaanka: Sannadka 20
Cinwaanka Tsca Vi U hoggaansan
Ku -celcelinta Qaabka: 12 Iyadoo Wareegga Guddiga
sagxadda laminate waa alaab ka kooban sagxad isku dhafan. Waxay ka kooban tahay lakabyo kala duwan, waxay jirtay ilaa 50 sano, waxaana loogu talagalay inay ku darto qaab iyo qiime gurigaaga iyadoo laga hortagayo xirashada iyo jeexitaanka. Badanaa, waxaa loogu talagalay inay u ekaato alwaax (laakiin had iyo jeer ma aha).
Laakiin taasi runtii waa caarada barafka. Maalmahan, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah sagxadaha laminate -kasta oo leh faa'iidooyin iyo qasaarooyin u gaar ah. In kasta oo inta badan la tirtiro iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaheeda isbarbardhigga hooseeya iyo muuqaalkii hore ee macmalka ahaa (xoxo 1980-meeyadii), sagxadda laminate-ka ayaa runtii iska soo gashay iyada oo ah nooc adag, soo jiidasho leh, dhaqaale leh, iyo dayactir hooseeya oo ah sagxadda dhulka.
Hoos, waxaan ku siin doonaa 411 wax walba oo laminate ah. Waxaan ka hadli doonaa waxa laminate ka samaysan yahay, sagxadda sagxadda sagxadda, cimri dhererkeeda, meesha aad ku rakibi karto, sida loo rakibo, iyo xittaa faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka.
Waa maxay Laminate Flooring Made? ah ?
Si guud marka loo hadlaayo, sagxadda dahaarka waxay ka kooban tahay saddex lakab. Hoosta, waxay kala yihiin:
Xuddunta cufan ama lakabka salka ah ee plywood ama fiberboard-ka cufnaanta sare si loo siiyo xoogga maaddada iyo xasilloonida. Saldhigani waa mid la mid ah oo loo adeegsado in badan oo ka mid ah alaabada sagxadda alwaax ee la farsameeyay.
Lakabka sawirka oo ah mid qaraar ah, sawirna leh. Mar labaad, lakabka sawirkani wuxuu inta badan ku daydaa alwaax-laakiin waxaad ka heli kartaa dhagaxa-fiirinta iyo xitaa kala duwanaanshaha u eg biraha.
Lakabka duugga ah ee ilaaliya si loo siiyo adayg iyo ilaalin. Lakabkani waa mid aad u adag, oo ka dhigaya laminate mid ka mid ah ikhtiyaarada sagxadda ugu cimri dheer.
Xaggee Ka Dhisi Kartaa Dabaqa Laminate?
Laminate-ku wuxuu aad ugu fiican yahay dariiqyada, albaabbada laga soo galo, qolalka cuntada, iyo qolalka fadhiga (maxaa yeelay lakabkiisa duugga ee aadka u waara wuxuu ka dhigan yahay inuu u adkaysan karo socodka cagaha culus iyo xoqidda). Laakiin muuqaalyadeeda aadka u wanaagsan ayaa waliba ka dhiga mid gebi ahaanba ku habboon qolalka jiifka, qolalka qoyska, iyo xitaa jikada mararka qaarkood.
Hore: dabaqa laminate ee midabada parquet
Xiga: Dib Qallaji